IZINDABA: UMartin Vrijland
Ubani uMartin Vrijland futhi kungani ehlala ematasa ebhala izihloko? Ezihlokweni ezimbalwa ngachaza ukuthi ezinye izinto eziseNetherlands zilawulwa ngokugcwele. Ngihlose ngokuqondile ukuthi 'ngilawulwe yi-service secret'. E-Netherlands, iqembu libizwa ngokuthi i-AIVD. Ukuze ukwazi ukufakazela lokho, empeleni kufanele uphume ngaphakathi. Lokho [...]
UMnu. Smith umphumela nokuzonda okuzenzekelayo lapho ubhekene 'nokucabanga okuhlukile'
Ubani okhumbula izigcawu ezivela ku-trilogy yefilimu ethi 'The Matrix' esuka ku-1999 lapho noma yimuphi umdluli angakwazi ukushintsha ngokungazelelwe abe 'i-agent'? Kusukela ngosuku engangiqala ngalo ukubhala, umkhankaso omkhulu usuqale ukungenza ngibe mnyama. Lokhu kubonakala emakhasini azo zonke avule imfucuza ngami futhi [...]
Umcabango nje ngesibangela somlilo we-Notre-Dame
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-18 April 2019	• 14 Amazwana
Singathanda ukungacabangi, kepha uma ufunda izithombe, umlilo ku-Notre Dame ubukeka njengomlilo olawulwa kahle. Ungasho ukuthi kulula kakhulu ku-Macron ukuthi ukwazi ukwenza njengomholi omkhulu, njengomlilo weReichstag eBerlin kusuka ku-1933 Adolf Hitler futhi kahle kakhulu [...]
Izitho eziphrintiwe ezivela ku-DNA yomzimba ziyiqiniso: bheka lapha inhliziyo yokuqala ephrintiwe ye-3D
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-17 April 2019	• 2 Amazwana
Cha, akusiyo izindaba eziyiqiniso, isayensi ibikezela njalo kusayithi. Inhliziyo yokuqala ye-3D ephrintiwe yiqiniso. Ososayensi base-Israyeli baye baphumelela ekunyatheliseni inhliziyo evela ku-DNA yabo. Inhliziyo ekhonjisiwe kuvidiyo engezansi ingahle ibe yayizibukhulu [...]
Ukuphazamiseka komlilo we-Notre-Dame ngomlilo e-Al-Aqsa Mosque iJerusalema (okumele yenze indlela yethempeli)?
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-15 April 2019	• 35 Amazwana
Umlilo omkhulu e-Notre Dame eParis ugcina imizwa ixakekile. Ngesikhathi esifanayo, uma umlayezo uqinisile, omunye umlilo uqhubeka, okungukuthi e-Al-Aqsa mosque eJerusalema. Umyalezo uvela kuwebhusayithi yezindaba ze-Newsweek.com futhi kubonakala sengathi uqinisile, kuze kube yilapho kungahlolwa. Vele uchofoze isixhumanisi. I [...]
"Utitjhere wesikolo esiphakeme onegciwane lesishukela" ukutjhuguluka ngokuphindaphindiwe ekugonyeni okuphoqelekileko
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-15 April 2019	• 7 Amazwana
Esikhathini esedlule wawuvele unesigqebhezana nezinye izifo ezinamagama ahlekisayo, ngakho waba nelusuku oluhle esikoleni futhi waya endlini kanina ukuze ugula. Namuhla i-syringe kufanele ifakwe futhi wonke umuntu unikezwa igciwane kusengaphambili ukwakha ukumelana. Pho kungani usinda ngokuzumayo, kanti [...]
Yiziphi izibonakaliso ongaphetha ngazo ngokuthi uJulian Assange Wikileaks ungumuntu we-PsyOp?
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-11 April 2019	• 21 Amazwana
Yiziphi izibonakaliso ongaphetha ngazo ngokuthi uJulian Assange Wikileaks ungumuntu we-PsyOp (ukusebenza kwengqondo)? Ungakwazi ukuyikhiphela cishe cishe konke. Okokuqala, i-Wikileaks ithole ukunakwa kwezindaba. Iqiniso lokuthi abezindaba bakhuthaza ngale ndlela libeke i-Wikileaks ebalazweni. Wena nami ngeke simane [...]
Ukuvakashelwa okuphelele: 8.578.514
SalmonInClick op Umcabango nje ngesibangela somlilo we-Notre-Dame
Kungani ufuna ukwazi lokhu? op Umcabango nje ngesibangela somlilo we-Notre-Dame
I-Riffian op Yiziphi izibonakaliso ongaphetha ngazo ngokuthi uJulian Assange Wikileaks ungumuntu we-PsyOp?
Ikhamera ye-2 op UMark Rutte nomthwalo osindayo wokuvakasha kwe-Ukraine
Joyina abanye ababhalisile abangu-1.576